Iindaba-IBULL Stacker Crane iQalisa njani uGcino oluBukrelekrele lwemithwalo enzima?
Bull series stacker cranesesona sixhobo sifanelekileyo sokuphatha izinto ezinzima ezinobunzima obungaphezulu kweetoni ezili-10.Olu hlobo lwe-crane ye-stacker luneempawu zokuthembeka okuphezulu kunye nomthamo omkhulu womthwalo.Ngeeyunithi zefolokhwe eziguquguqukayo zokuphatha iimpahla ezahlukeneyo, zibonelela ikakhulu izisombululo zokugcina i-pallet.
Layisha ukuya kuthi ga kwi-15,000kg;
Ukuphakama kofakelo ukuya kwi-25m;
Iyahambelana nokuphakama kunye nemithwalo ephezulu;
Ibonisa indibaniselwano egqibeleleyo yoyilo lobunjineli kunye netekhnoloji yokupakisha ipalethi.
Ukusebenzisa ukulawulwa kwesantya sokuguqulwa kwesantya, ukuqaphela idilesi ye-photoelectric okanye ukuqaphela idilesi ye-laser, ineempawu zentsebenzo yokulawula isantya esilungileyo kunye nokuchaneka okuphezulu kokupaka;
Imodi yokulawula umbane ine-manual, ngaphandle kwe-line ngokuzenzekelayo, kunye nolawulo oluzenzekelayo lwe-intanethi, olunokukhethwa ngokungaqhelekanga;
Umgca wokudibanisa ukhuseleko usetyenziselwa ukudibanisa umbane kwisixhobo sokuhambisa umbane, esikhuselekileyo nesithembekileyo;
Isixhobo sokukhusela ukhuseleko sithembekile kwaye siphelele;
Ingasetyenziselwa ukudibanisa kunye namashalofu aphakamileyo aphezulu, amaqonga okugcina angaphakathi-ngaphandle okanye iinkqubo zokugcina ngaphandle kunye nezinye izixhobo, kwaye unokwenza ukunyakaza okuphindaphindiweyo kwindawo emithathu-dimensional (ukuhamba, ukuphakamisa, kunye nokwelula kumacala omabini) ngokutsho. kulandelelwano oluthile.Ukuze kugqitywe imisebenzi yokuphatha yeyunithi efakwe kwiphalethi okanye iimpahla ezichongiweyo zokungena nangaphandle kwendawo yokugcina impahla.
Ulwakhiwo olubambeneyo, uzinzo oluhle, kunye nokuqwalasela ngokupheleleyo iimfuno ze-ergonomics;
Isixhobo esichasene ne-rolling sifakwe kwi-platform yempahla, kwaye ilawulwa yi-cylinder yombane kunye nokutshintsha kombane, isikhundla sinokulungiswa ngokuzenzekelayo ngokuhambelana nobukhulu bomthwalo wokukhusela imithwalo ekuqhubeni ukuya kwinqanaba elikhulu;
Kwimpahla ebotshiweyo, ifolokhwe enobulukhuni obuphezulu obuyi-V yenzelwe kwaye iphuhliswe;
Isakhiwo sesinyithi se-fuselage samkela i-CO2 yegesi ekhuselekileyo ye-welding kunye noqhagamshelwano oluphezulu lwebholiti.
Ukongezelela ekusetyenzisweni ngokuzenzekelayo ukugcinwa kweentsimbi ezikhethekileyo ezigqityiweyo (iindawo zomthwalo onzima kakhulu), zingaphinda zisetyenziswe kwamanye amashishini anzima (ngaphandle kweendawo zokugcina iimpahla ezicocekileyo).
Okwangoku, iinkomo series stacker inkqubo craneisetyenziswe ngokubanzi.Ukunceda abathengi abakwiimeko ezinomthwalo onzima bafezekise ukuncipha kweendleko kunye nokuphucula ukusebenza kakuhle kuyo yonke le nkqubo ngophuculo olukrelekrele lolungiselelo kunye nogcino.
Umhambisi, Asrs Ugcino, IShuttle yomntwana, Qhuba kwi Racking, I-Four Way Shuttle, ICarton Live,